သူ့ရဲ့ ပုံတူကို သရောပါဆေးမငျကွောငျထိုးပေးတဲ့ တတိယမွောကျမွနျမာနိုငျငံသားကွောငျ့ မကျြရညျတောငျဝဲမိတယျဆိုတဲ့ Sinon Loresca – မြန်မာသတင်းစုံ
Posted on October 21, 2020 Author admin	Comments Off on သူ့ရဲ့ ပုံတူကို သရောပါဆေးမငျကွောငျထိုးပေးတဲ့ တတိယမွောကျမွနျမာနိုငျငံသားကွောငျ့ မကျြရညျတောငျဝဲမိတယျဆိုတဲ့ Sinon Loresca
တစ်ကမ္ဘာလုံးက Catwalk King လို့ တင်စားခေါ်ဝေါ်ရလောက်တဲ့အထိ အရည်အချင်းရှိတဲ့
ဖိလစ်ပိုင် LGBT မော်ဒယ် Sinon Loresca ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံကို အရမ်းချစ်ပြီး သူ့ရဲ့ဒုတိယမြောက် မိခင်နိုင်ငံလို့တောင် ပြောလေ့ရှိသူတစ်ဦးပါ။
Sinon က မြန်မာနိုင်ငံမှာ အခြေချနေထိုင်နေခဲ့တာ အခုဆိုရင် (၁) နှစ်တာ အချိန်ကို ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး
မြန်မာလူမျိုးများအတွက် မေတ္တာတွေကို ပေးစွမ်းနေသူတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပရိသတ်တွေကလည်း နူညံ့ပြီး ကြင်နာတတ်တဲ့ နှလုံးသားပိုင်ရှင် Sinon ကို
စိတ်ထားကောင်းပြီး ကြင်နာတတ်တဲ့ Sinon ကို မြန်မာပရိသတ်တွေက ချစ်လွန်းအားကြီးလို့ တစ်ချို့ပရိသတ်တွေဆိုရင်
သေရာပါတဲ့အထိ ဆေးမင်ကြောင်တက်တူးတွေထိုးပြီး အားပေးဝန်းရံကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကနေ့မှာလည်း Sinon က
“မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း တတိယမြောက် ကျွန်နော်၏ မျက်နှာပုံ သေရာ ပါတက်တူး ထိုးထားသော ချစ်ရသော ပရိတ်သတ်ကို
ကျန်နော် အရမ်းလေးစားပြီး ဂုဏ်ယူပြီး မျက်ရည် ဝဲ မိပါတယ်။
ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပြီး လေးစားလျက်. ” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာမှာ ပြောလာပါတယ်
သူ့ရဲ့ ပုံတူကို သေရာပါဆေးမင်ကြောင်ထိုးပေးတဲ့ တတိယမြောက်မြန်မာနိုင်ငံသားကြောင့် မျက်ရည်တောင်ဝဲမိတဲ့အထိ ဝမ်းသာနေရှာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မေတ္တာတွေပေးလို့ မေတ္တာတွေပြန်ရတဲ့ Sinon ရဲ့အဖြစ်က အားကျစရာပါပဲနော်။
ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
တဈကမ်ဘာလုံးက Catwalk King လို့ တငျစားချေါဝျေါရလောကျတဲ့အထိ အရညျအခငျြးရှိတဲ့
ဖိလဈပိုငျ LGBT မျောဒယျ Sinon Loresca ကတော့ မွနျမာနိုငျငံကို အရမျးခဈြပွီး သူ့ရဲ့ဒုတိယမွောကျ မိခငျနိုငျငံလို့တောငျ ပွောလရှေိ့သူတဈဦးပါ။
Sinon က မွနျမာနိုငျငံမှာ အခွခေနြထေိုငျနခေဲ့တာ အခုဆိုရငျ (၁) နှဈတာ အခြိနျကို ရောကျရှိနပွေီဖွဈပွီး
မွနျမာလူမြိုးမြားအတှကျ မတ်ေတာတှကေို ပေးစှမျးနသေူတဈယောကျပဲ ဖွဈပါတယျ။
ပရိသတျတှကေလညျး နူညံ့ပွီး ကွငျနာတတျတဲ့ နှလုံးသားပိုငျရှငျ Sinon ကို
စိတျထားကောငျးပွီး ကွငျနာတတျတဲ့ Sinon ကို မွနျမာပရိသတျတှကေ ခဈြလှနျးအားကွီးလို့ တဈခြို့ပရိသတျတှဆေိုရငျ
သရောပါတဲ့အထိ ဆေးမငျကွောငျတကျတူးတှထေိုးပွီး အားပေးဝနျးရံကွတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဒီကနမှေ့ာလညျး Sinon က
“မွနျမာနိုငျငံအတှငျး တတိယမွောကျ ကြှနျနျော၏ မကျြနှာပုံ သရော ပါတကျတူး ထိုးထားသော ခဈြရသော ပရိတျသတျကို
ကနျြနျော အရမျးလေးစားပွီး ဂုဏျယူပွီး မကျြရညျ ဝဲ မိပါတယျ။
ကြေးဇူးအရမျးတငျပွီး လေးစားလကျြ. ” ဆိုပွီး သူ့ရဲ့ ဖစျေ့ဘုတျစာမကျြနှာမှာ ပွောလာပါတယျ
သူ့ရဲ့ ပုံတူကို သရောပါဆေးမငျကွောငျထိုးပေးတဲ့ တတိယမွောကျမွနျမာနိုငျငံသားကွောငျ့ မကျြရညျတောငျဝဲမိတဲ့အထိ ဝမျးသာနရှောတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
မတ်ေတာတှပေေးလို့ မတ်ေတာတှပွေနျရတဲ့ Sinon ရဲ့အဖွဈက အားကစြရာပါပဲနျော။
ဖတျရှုပေးတဲ့ ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။
မြန်မာသံစဉ်တေးသီချင်းတွေကို နားဝင်ချိုအောင် သီဆိုနိုင်စွမ်းရှိသူကတော့ အဆိုတော် ဖိုးသောကြာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဂီတနဲ့ပတ်သက်ရင် အင်မတန်ထူးချွန်တဲ့ ဖိုးသောကြာက သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာလည်း အရည်အချင်းရှိသူတစ်ယောက်ပါပဲနော်။ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင် အဆိုတော်၊သရုပ်ဆောင်အဖြစ် ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ ဖိုးသောကြာက ချစ်ခင်အားပေးသူပရိသတ်တွေ အများအပြားကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ လက်ရှိမှာတော့ ဖိုးသောကြာက အိမ်ထောင်ကျပြီး ချစ်ရတဲ့ဇနီးချောလေးနဲ့အတူ ပျော်ရွှင်စရာဘဝလေးကို တည်ဆောက်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ သမီးလေးနှစ်ယောက်ရရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ ဖိုးသောကြာရဲ့ဘဝလေးကတော့ ကြည်နူးအားကျစရာကောင်းလောက်ပါတယ်နော်။ အခုလည်း ဖိုးသောကြာက အရမ်းလိမ္မာတဲ့သူ့ရဲ့သမီးလေးနဲ့ ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုကို မျှဝေပေးလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ ဖိုးသောကြာရဲ့သမီးငယ်လေးက သူ့ဖေဖေကို ဘုရားရှိခိုးဖို့ ဘုရားခန်းထဲအထိ မရမကလက်ဆွဲပြီး ခေါ်သွားခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ အသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့တောင် ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းပြီး လိမ္မာရေးခြားရှိတဲ့ ဖိုးသောကြာရဲ့သမီးလေးက အရမ်းကိုချစ်ဖို့ကောင်းနေတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ […]
ထူးထူးခွားခွား ဝဘောဂီ ဆေးရုံကွီးသို့ကွှရောကျလာသညျ့ မိုငျးဖုနျးဆရာတျောဘုရားကွီးအကွောငျး ပွောပွလာတဲ့ ဦးကြျောသူ
ပရိသတ်ကြီးရေ နိုင်ငံကျော်သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်သလို (ရန်ကုန်) နာရေးကူညီမှုအသင်းရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်တဲ့ ဦးကျော်သူ ကတော့ ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ကိုင်ပေးရင်း Covid ရောဂါကူးစက်ခံထားရတာကို ပရိသတ်တွေ သိရှိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ ဦးကျော်သူ ကိုတော့ ရန်ကုန် ဝေဘာဂီ ဆေးရုံကြီးမှာ ဆေးကုသမှုကို ကောင်းစွာခံယူနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့ထိ ဦးကျော်သူဟာ ရောဂါလက္ခဏာမပြပဲ ကျန်းကျန်းမာမာ နဲ့ ရှိနေပါတယ်။ ဦးကျော်သူရဲ့ ဆေးကုသမှုရဲ့နောက်ကိုတော့ မော်လ်ဒယ်သရုပ်ဆောင် ထွန်းကိုကို က လိုက်ပါအဖော်ပြု ကူညီစောင့်ရှောက်ပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုမှာတော့ ဦးကျော်သူက ဆေးကုသမှုခံယူနေရင်း ထူးခြားတဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးကို ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။ “ဝေဘာဂီ သို့ကြွရောက်လာသည့် မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး……ယမန်နေ့ညဖက် ဝေဘာဂီဆေးရုံတွင် ညမအိပ်ခင် လွယ်အိတ်ထဲမှ မိမိကိုယ်နှင့်မကွာယူဆောင်လေ့ရှိသော သာသနာပြုလွယ်အိတ်ငယ်လေးထဲမှ မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ကြီး၏ပုံတော် အသေးအားခေါင်းအုံးပေါ်တင်၍ ဘုရားဝတ်ပြု၊ဂုဏ်တော်ပွားကာ နဂါးမင်းများအားမေတ္တာပို့သခဲ့ပါသည်….. ယနေ့နံနက်စာ စားအပြီး […]
ပရိသတ်ကြီးရေ.. လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေက အရမ်းကိုအောင်မြင်လူကြိုက်များခဲ့တဲ့ “မင်းလက်ကလေး ကိုင်ချင်လို့ တစ်စက္ကန့်လောက် ခွင့်ပြုပါ” ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးကိုတော့ ပရိသတ်တွေ ယနေ့အချိန်ထိ စွဲမြဲစွာ အမှတ်ရနေကြဦးမှာပါနော်..။ “တစ်စက္ကန့်”သီချင်းလေးကို Rဇာနည်၊ ကျော်သူစိုးနဲ့အတူ တွဲဖက်ပြီးသီဆိုခဲ့တဲ့ Rapper အဆိုတော် စိုးမိုးမင်းကတော့ ယနေ့မှာပဲ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်နော်..။ Rap ဂီတကို ရူးသွပ်ကာ အနုပညာရှင်အချင်းချင်းကတောင် လေးစားအားကျခဲ့ရ Zero အဖွဲ့မှ Rapper အဆိုတော် စိုးမိုးမင်းဟာ အသည်းရောဂါနဲ့ ချင်းမိုင်မြို့မှာ ကွယ်လွန်သွားတာပါ..။ အကြွေစောလွန်းတဲ့ စိုးမိုးမင်းရဲ့ စိတ်မကောင်းစရာသတင်းကတော့ ဂီတအနုပညာရှင်တွေကို အတော်လေး အံ့သြသင့်စေခဲ့ပြီး မယုံနိုင်လောက်အောင် စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာလည်း တွေ့ရပြီး ဝမ်းနည်းစကားလေးတွေလည်း ဆိုထားကြပါတယ်နော်..။ “သူငယ်ချင်းတို့ ငါတို့ကောင်ကြီး ” စိုးမိုးမင်း” ဆုံးသွားပြီ.. ကျော်သူစိုး လှမ်းပြောတာ ကောင်းရာမွန်ရာရောက်ပါစေကွာ..” […]
Facebook live ကနေ ဂိမျးကစားပွီး သိနျး (၄၀) ကြျောရရှိနိုငျမယျ့ သူမရဲ့ ကံစမျးမဲအစီအစဉျလေးကို ပွောပွလာတဲ့ စမိုငျးလျရဲ့ ဗီဒီယို
တဈနာရီကြျောအတှငျးသိနျး (၈၀၀) ကြျောဖိုးထိ ရတနာပစ်စညျးတှေ ရောငျးခပြေးနိုငျခဲ့တယျဆိုတဲ့ စိုးမွတျသူဇာ (ရုပျသံ)